३००० मा श्रम बेच्न वाध्य विद्यार्थीहरुलाई थोरै राहत ! अन्तत : बढ्यो सिए विद्यार्थीहरुको 'स्टाइपेन्ड' !
ARCHIVE, SPECIAL » ३००० मा श्रम बेच्न वाध्य विद्यार्थीहरुलाई थोरै राहत ! अन्तत : बढ्यो सिए विद्यार्थीहरुको 'स्टाइपेन्ड' !
काठमाडौँ - नेपालमा सिएको तेश्रो तह अध्ययन गर्दा गर्नुपर्ने 'आर्टिकलशिप'का समयमा विद्यार्थीले पाउने प्रारिश्रमिक (स्टाइपेन्ड) थोरै भएपनि बढेको छ । लामो समयको विद्यार्थीको स्टाइपेन्ड बढाउने माग नियामक निकाय आइक्यानले सम्बोधन गरेको हो ।
आइक्यानले आउँदो आर्थिक बर्षदेखि लागु हुने गरी स्टाइपेन्ड बढाएको हो । अव विद्यार्थीले पहिलो वर्षमा ४००० रुपैयाँ दोश्रो वर्षमा ६००० रुपैयाँ र तेश्रो बर्षमा ७००० रुपैयाँ पाउने गरी निर्णय गरेको हो । यसअघि यो रकम ३०००, ४०००, र ५००० थियो ।
प्रकाशित : Saturday, June 24, 2017